Saka Tany amin'ny cam Chat maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana
Saka Tany amin’ny cam Chat maimaim-poana tsy misy fisoratana anarana
Amin’ny Ankizivavy Tsindrio Eto! Tsy izany no fotoana be dia be ao izay chat tany misy, ary tsy mbola misy fomba hamadihana ny cam ao amin’ny tranonkala ity, dia izao atao amin’ny alalan’ny saka cam.
Ianao no manana azy io eo amin’ny chat tany cam izany dia tsy teny, fa koa ny top-level ny fivoriana miaraka amin’ny cam ankehitriny, lasa haingana mampiankin-doha ity vaovao rehetra safidy ary sarotra ny lahiny fakana herinaratra.
Izaho hitsena ny ankizivavy iray amin’ny chat tany cam ary afaka manome toky anareo aho fa ny hatsaran-tarehy tsy misy anarana, misy be dia be ny hafa mba hihaona miaraka amin’ny cam
Efa mba hanao izany ho maimaim-poana raha tsy izany, inona no mety ho nanompo? Ny zavatra rehetra dia afaka ary, toy ny mahazatra, ao amin’ny chat cam izany no mahafinaritra anao amin’ny chat tsy misy fisoratana anarana, tantara tsy ho afaka manaiky ianao raha toa ka efa nanapa-kevitra mba ho ao amin’ny fomba mifono zava-miafina.
Tsara ny hany zavatra kely manelingelina azy dia mozika (onjam-peo) fa ny niantombohan’ny an-toerana amin’ny startup, fa tsy raiki-tahotra namako, isika dia mahafantatra ny foano ao tsindrio
Saka tany tsy misy fisoratana anarana mahafeno ny fepetra rehetra izay manao fa iray amin’ny chat dia malaza, na mahaliana ny rafitra, webcam ny fampisehoana, ny saka feno maro ny tovovavy ary na dia ny fahafahana mamorona ny efitra amin’ny chat cam maimaim-poana.
Fa ny fangatahana ny olona? Tamin’izany fotoana izany aho hilazana aminao ireo andalana vitsivitsy misy tafio-drivotra, ny fotoana tsara indrindra, mba ho tonga amin’ny chat ao amin’ny chat tany
← Vohikala maimaim-poana Manana ny Lahatsary amin'ny Chat an-Tserasera Tsy misy Fisoratana anarana
Mampiaraka tsy misy sary →